Mooge/HIBF - Maalinta saddexaad - Jimce 24 Julaay 2009
Maalinta Saddexaad - Jimce 24 Julaay 2009
Dhacdada Kowaad: Naadiga Akhriska Hargeysa - Waqtiga 9:00 – 10:00 Fadhigan waxa lagu ebyayaa daawsho buugaag loogu talo galay dugsiyada halkaas oo qaar ardayda dugsiyada Hargeysa ka socdaa ay booqanayaan carwada Buugaagta, iyagoo isbedbedalaya ayaa raxan arday ah oo ka kooban 30-40 arday oo ay la socdaan macallimiintoodu ay imanayaan carwada.
Dhacdada Labaad: Bandhigga Buugagga - Waqtiga 10:00 – 11:00 Fadhiga hore, waxa qoraaladooda ka faalloonayaa laba qore oo qurbajoogga ah iyo hal qore oo gudaha dalka ah markaas ka dibna waa laga doodayaa. Qorayaashaas oo ay ka mid yihiin Dr Xuseen C. Bulxan, Cabdalle Cisman oo qoray kartoono carruurta loogu talogalay iyo Mustafe A Nuur oo ka hadlaya Sheeko iyo Shaahid.
Dhacdada Afraad: Dhawaaqa haweenka oo isugu jira miyuusig, heeso, gabay iyo dood. Waxa hagaysa Aamina Ismaaciil Ducaale (Nagaad) - Waqtiga 16:00 -18:30 Ujeedadda barnaamijka waxa ka mid ah badhitaaridda iyo dhiirrigelinta haweenka hal-abuurka ah iyo qiimeynta kaalinta ay ku leeyihiin gabayga iyo suugaanta guud ahaan. Waxa jiraya bandhig masraxeedyo muujinaya arrimaha jinsiga (gender issues) iyo kaalinta haweenku bulshada kaga jiraan. Haween da’ yar ayaa fursad u helaya inay soo bandhigaan fanka ay hindiseen. Halabuurka haweenka wax qiimo ah loo siin jirin, iyadoo dad badani aaminsanaayeen inaan suugaantoodu istaahilin in la shaaciyo ama fagaare laga tiriyo. Haseyeeshee, waxa aan shaki ku jirin la iskuna raacsan yahay inay jiraan haween badan oo safka hore kaga jira suugaantii hore, tan casriga ahna qayb libaax ka qaadan kara haddii la siiyo tixgelinta iyo taakulada ay u baahan yihiin. Waxa dhacdadan ka dhex muuqanaya abwaanadda Saado Cabdi Amarre, Nimco Gabaydo, Canab Wanweyn, Foosiya Maxamed Hormood iyo Nuura Maxamed
Dhacdada Shanaad: Cawayska heesaha iyo jaceylka. Waxa hagaya Xassan Maxamed Yuusuf) Waqtiga: 18:30 – 20:30 Habeenkan waxaa halkan ku kulmaya halabuur iyo fan aad u sarreeya oo ay ka mid yihiin Maxamed Jaamac Kayd, Axmed Saleebaan Bidde, Haldeeq, Aamina Cabdillaahi, Sahra Axmed, Cabdi Nuur Allaale iyo qaar kale oo fara badan, waxaa mawduuca caways-kani yahay halabuurka iyo jacaylka.